December 2021 - SANTHITSA
“ငရဲသားသည် ငရဲမီးထဲ၌ အဘယ်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းမသွားသနည်း”
“ငရဲသားသည် ငရဲမီးထဲ၌ အဘယ်ကြောင့် လောင်ကျွမ်းမသွားသနည်း” မင်း ; ; ” အရှင်နာဂသေနဘုရား – ပကတိ ( သာမန် ) မီးထက် ငရဲမီးသည် လွန်လွန်မင်းမင်း အပူရှိန် ပြင်းလှ၏။ ပကတိမီးထဲ၌ ပစ်ချထားသော ကျောက်ခဲကလေးသည် တစ်နေ့လုံး ပူလောင်နေသော်လည်း ကြေညက် မသွားနိုင်ပေ။ အိမ်လုံးလောက်ရှိသော ကျောက်တုံးကြီးကို ငရဲမီးထဲ ပစ်ချလိုက်ပါမူကား တစ်ခဏချင်းပင် ကြေညက်သွားနိုင်၏ ဟု အရှင်ဘုရားတို့ မိန့်ဆို ကြပါကုန်၏။ ထိုစကားကို တပည့်တော် မယုံနိုင်ပါ။ ထို့ပြင်လည်း ငရဲသို့ ကျရောက်ကုန်သော သတ္တဝါတို့သည် နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ ငရဲမီး၌ အလောင်အကျွမ်း ခံနေကြရသော်လည်း ကြေညက် မသွားကြကုန် …
” ဘုရားကို စီးပွားတက်ချင်လို့ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင် သရဏဂုံ မမြောက်ဘူး။ “
” ဘုရားကို စီးပွားတက်ချင်လို့ ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင် သရဏဂုံ မမြောက်ဘူး။ “ အခုခေတ်မှာ ဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရား ရုပ်တုဆင်းတုတော် အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကိုးကွယ်တာတုန်းဆို အဆုံးအမရလို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ကိုးကွယ်တာ။ မြတ်စွာဘုရားက သက်တော်ထင်ရှား မရှိတော့ ကိုယ်စားရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ရရှိလို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ဘုရားဂုဏ်ကို အာရုံပြုဖို့ ကိုးကွယ်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ကို ကိုးကွယ်ထားခြင်းဖြင့် တို့အိမ်မှာ စီးပွားဥစ္စာတွေ တိုးတက်တယ်၊ ဒီလိုယုံကြည်ပြီး ကိုးကွယ်လို့ရှိရင် မှားယွင်းမှာပဲ။ ဒီဘုရားကိုးကွယ်ထားရင် မီးကွင်းတယ်၊ မီးမလောင်ဘူးဆိုပြီး ကိုးကွယ်တာလည်း ရှိတယ်။ ဒါတွေက မှန်ကန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မဟုတ်ဘူး။ …
“အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးမှာ အပင်တွေ ပိုးမကျအောင် ဘာဆေးသုံးသလဲ”
“အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးမှာ အပင်တွေ ပိုးမကျအောင် ဘာဆေးသုံးသလဲ” ကျနော်မနေ့က တင်ခဲ့တဲ့ တိုင်ထောင်ပဲသီးတွေ တလှေကြီးသီးနေတဲ့အခင်းကို အပင်ငယ်ငယ်က ဆေးရွက်ကြီး+ငြုတ်သီး+ အရက် ရောထားတဲ့ ပိုးသတ်ဆေးတကြိမ်သာဖြန်းလိုက်ရပါတယ်။ အခုပြထားတဲ့ ကန့်လန်ဆိုင် ဟင်းရွက်ခင်းမှာလည်း ငယ်စဉ်က အပင် ၂ ပင် ၃ ပင်လောက် ပိုးစကျစဉ်မှာ အဲဒီ အော်ဂဲနစ်ဆေးရည်ဘဲ တကြိမ်ဖျန်းဖူးပါတယ်။ အခုသွားကြည့်တော့ သန်လိုက်တဲ့ အရွက်တွေ၊ ပိုးကျတာလည်း တပင်မှ မတွေ့ရပါ။ ဖရန့် တယောက်က ဆေးဖေါ်နည်းကို ပိုစ့်တခု သပ်သပ်တင်ပေးပါဆိုလို့ အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သဘာဝပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း အပင်၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများမှရရှိသော သဘာဝဆေးများဖြင့် အပင်ရောဂါနှင့် ပိုးမွှား များကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ …
အူဘာမီယန်ကို နမူနာလုပ်ပြလိုက်လို့ အာဆင်နယ်က ပိုကောင်းလာတယ် လို့ ပါလာဆို
အူဘာမီယန်ကို နမူနာလုပ်ပြလိုက်လို့ အာဆင်နယ်က ပိုကောင်းလာတယ် လို့ ပါလာဆို မောင်ယဿ ( ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ) မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ကာရာဘောင်ဖလား ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲမှာ အာဆင်နယ်က အိမ်ကွင်းမှာ ဆန်ဒါးလန်း အသင်း ကို ( ၅ – ၁ ) ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိပွဲပြီးတော့ အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာက တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တာက အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေကို နမူနာပြလိုက် သလို ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းမှုရော ကစားပုံပါ ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ က ပွဲမှာ အာဆင်းနယ်က အိမ်ကွင်းမှာ အောက်တန်းက ဆန်းဒါးလန်းအသင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား အပေါ်စီးကနေ …
“ဘာကြောင့် စာဖတ်ဖို့လိုသလဲ” အရမ်းတန်ဖိုးရှိလို့ အချိန် ၂မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်နော်….
“ဘာကြောင့် စာဖတ်ဖို့လိုသလဲ” အရမ်းတန်ဖိုးရှိလို့ အချိန် ၂မိနစ်လောက်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်နော်…. ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းရဲ့ အကြိုက်ဆုံးထဲက အကြိုက်ဆုံးစကား… လူနဲ့တိရစ္ဆာန် ဘယ်သူသာလဲမေးရင်??? လူကသာတယ်လိုပဲ ဖြေကြတယ်… စဉ်းစားကြည့်ရအောင်… မြင်းလောက်အပြေးသန်သလား? – ဆင်လောက်ခွန်အားကြီးသလား? – ငါးလောက်ရေကူးကျွမ်းသလား? – ကျီးကန်တို့လဒတို့လောက် မျက်စိလျှင် လား? – အယ်ဇေးရှင်းခွေးလောက် အနံ့ခံကောင်းလား? အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဘာနဲ့ ညာနဲ့ စည်းလုံးတယ် ဘာညာနဲ့ မပြောနဲ့… ပျားတွေလောက် မစည်းလုံးဘူးနော်… ပျားတွေဟာ သိပ်ဝီရိယကောင်းတယ် ပန်းပွင့်မညိုးခင် မနက်စောစော ကတည်းက လုံ့လစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်။ ပျားတစ်ကောင်ဟာ ပန်းဝတ်ရည်ကို တွေ့လာရင် သတင်းလာပို့တယ်… သူက ဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ် နောက်ကပျားတွေကလည်း ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်တယ်… သူတို့ယူလာတဲ့ …
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခပြောခဲ့တဲ့ စီးပွားရှာသူတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်း (၇)ခု
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခပြောခဲ့တဲ့ စီးပွားရှာသူတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်း (၇)ခု ၁. မင်းပိုင်တဲ့တောင်းထဲမှာ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရှိတယ် တစ်နေ့ကို ၉လုံးစားပြီး ၁ လုံးချန်ထားလို့ ၁ဝရက်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရောက်နေပြီပေါ့ တစ်လုံးလျှော့စားလိုက်တဲ့အတွက် မင်းလည်း ဘာမှ မသိသာပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဝင်ငွေ ၁ဝပုံ ၁ပုံကို အမြဲချန်ထားရမယ်ကွ။ ၉ ပုံတောင် သုံးရတဲ့အတွက် ဒီလောက်ကြီးလည်း ချိုးခြုံရာမကြဘူး မဟုတ်လား ဒါ ငါပြောချင်တဲ့ မြေပုံ ၁ ကွ။ ၂။ နောက်တစ်ခုက မင်းရဲ့ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ တွေကို သေသေချာချာသိထားဖို့လိုတယ်။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ ထွက်နေတဲ့ လမ်း …
အစာလည်း ဆေး ဆေးလည်းအစာ သဘောထားရင်း မြူရွက်သုပ်စားကြပါစို့လား
အစာလည်း ဆေး ဆေးလည်းအစာ သဘောထားရင်း မြူရွက်သုပ်စားကြပါစို့လား မြူပင်ကို အညာဒေသက လူတွေရင်းနှီးကြတယ်။ မြို့ပေါ်နေသော ကျောင်းသားကျောင်သူတွေကတော့ မြင်ဖူးကြမည်မထင်ပါ၊ မြူပင်ကို ဘယ်သူမှတခုတရ မစိုက်ကြပါဖူး၊ ပေါင်းပင်အနေဖြင့် ရှင်းလို့တောင်မနိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ North India မှာတော့ food crop အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးကြတယ်၊ ဆောင်းရာသီကြမှ ဒီအပင်တွေကိုတွေ့ရမယ်။ ရှင်းမနိုင်သည့်ပေါင်းပင် တနှစ်တခါသာ ပေါ်လာတတ်သည် တနှစ်ခံပင် ပြော့လေးတွေဖြစ်တယ်၊ ပန်းခိုင်က ထိပ်ထွက် ဖြစ်လို့ အသီးသီးချိန်မှာ ပြော့ပြောင်းသော ပင်စည်က ပန်းခိုင်ရဲ့ အလေးချိန်ကို မထမ်းနိုင်ပါဘူး ၊ အသီးသီးချိန်ဆိုရင် အပင်က တဖက်ကို ယိုင်နေတတ်တယ်၊ ပန်းခိုင်တခိုင်ကနေ အစေ့ပေါင်း ထောင်ချီပြီး ထွက်ကျစေနိုင်တယ် ၊ …
ပွဲဆူသွားတဲ့ မနေ့ညက ကစားသွားတဲ့ စပါး – လီဗာပူးပွဲ
ပွဲဆူသွားတဲ့ မနေ့ညက ကစားသွားတဲ့ စပါး – လီဗာပူးပွဲ မောင်ယဿ ( ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ) အရင်ဆုံးပြောချင်တာက မနေ့ ည က ကစားခဲ့တဲ့ စပါးနဲ့ လီဗာပူး ပွဲကို ယူကျူ့မှာ ဟိုက်လိုက်လေး ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးရသလဲ ဆိုတာကို သိသွားမှာပါ။ အပြန်အလှန်ဂိုးသွင်းမှုတွေ နဲ့ စိတ်လှုတ်ရှားစရာကောင်းသလို ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကို ပေါက်ကွဲမိမှာပါ။ ဒါ့အပြင် အိမ်ကွင်း အာသားချက်ဆိုတာ ဘာလဲဆို နားလည်း သဘောပေါက်ရုံ အပြင် ဆယ်လီဖြစ်သွားရင် ဥပဒေဆိုတာ အကာအကွယ် တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သိသွားမှာပါ။ ဟာရီကိန်းဆိုတာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးပါ ။ အင်္ဂလန် …
အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်အရွယ်မှာလည်း နုပျိုလှပနေစေဖို့ ဒါလေးတွေလုပ်ပါ..။
အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်အရွယ်မှာလည်း နုပျိုလှပနေစေဖို့ ဒါလေးတွေလုပ်ပါ..။ ဘယ်လောက်ပဲ အသက်တွေရလာပါစေ။ လူတိုင်း လှချင်ကြပါတယ်။ နုပျိုနေသူ တစ်ယောက် အတွက်တော့ အသက်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါပဲ..၊ အသက် ၃၀ ဆိုတာ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ အရွယ်အပိုင်း တခြား တစ်ခု ဖြစ်သလို အလှပဆုံး အချိန်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး..။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်မှာ သင့်ကို ပိုပိုပြီးလှနေစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်..။ ၁။ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပါ။ ရေကို သတိတရသောက်ပေးပါ။ အနည်းဆုံး တစ်နေ့ ၈ ခွက်သောက်ပေးသင့်ပါတယ်..။ ၂။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အရမ်းပြင်းပြင်း ထန်ထန် မဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်လေး လုပ်သွား ပေးပါ။ တစ်နေ့ …
“သူယုံကြည်မှုကို နင်းမယ် တွေးမိတိုင်း ငါအလှည့်ဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ”
“သူယုံကြည်မှုကို နင်းမယ် တွေးမိတိုင်း ငါအလှည့်ဆိုတာကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ” တန်ဖိုးဆိုတာသိမှ တစ်ခါတုန်းက ကလေးတစ်ယောက် တောထဲမှာ ဆော့ကစားရင်း ကျောက်တုံးလေးဆယ်တုံး လှလို့ဆိုပြီး အိမ်ယူလာတယ် ပြီးတော့ ရေကန်ထဲ ပစ်ထည့်ထားလိုက်တယ်… တနေ့ကျတော့ သူ့အိမ်ကို အလှမွေးငါးရောင်းတဲ့လူလာရင်း ကျောက်တုံးလေးတွေကို တွေ့သွားတယ် ပြီးတော့ သဘောကျလို့ နှစ်တုံး ကိုတစ်ထောင်ပေးပြီး ယူသွားတယ်… နောက်တနေ့ကျတော့ သူ့အိမ်ကို စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက် ရေတောင်းသောက်ရင်း ကျောက်တုံးလေးတွေကို ကြည့်ရင်း အဖိုးတန်မှန်းသိလို့ နှစ်တုံးကို တစ်သောင်းနဲ့ ပေးယူသွားတယ်… နောက်သိမ်မကြာခင်မှာ ရတနာကုန်သည်တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ခဏနား ခြေလက်ဆေးရင်း အဲ့ကျောက်တုံးလေးတွေကို တွေ့သွားတယ် ဒါဟာ စိန်ရိုင်းတုံးတွေမှန်း သိတော့ ဆယ်သိန်းပေးပြီး နှစ်တုံးယူသွားတယ်… အဲ့လိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ …